Ụzọ 6 iji nweta akwụkwọ ntọala ILIL - Ọzụzụ ITIL na Gurgaon
Otu esi enweta akwukwo nke Foundation ITIL
Otu esi enweta akwukwo nke Foundation IT na Gurgaon
ITIL bụ ihe omuma maka Ụlọ Akwụkwọ Ịzụ Ihe Ịzụ Ihe ọmụma. Ọ bụ site na Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) malitere na 1980s iji mepụta otu ụkpụrụ. Na April 2001, CCTA jikọtara n'otu ụlọ ọrụ nke UK Treasury - OGC.
ITIL bụ usoro kachasị mma maka Njikwa Ọrụ Ntanetị (ITSM) nke na-enye aka n'inweta nkwado dị mma na nnyefe nke ọrụ IT dị elu ma dị ọnụ ala. Usoro nhazi nke Foundation ITIL na-enye ihe ọmụma bara uru nke echiche, isi, usoro na ọrụ ndị achọrọ maka ITSM. Usoro ahụ na-akwadebe onye na-akwado ya ka o nwee ihe ịga nke ọma na-egosi maka Foundation ITIL ule akwukwo.
Ihe nyocha nke Foundation ITIL na-ekpuchi usoro 26 ITIL n'okpuru usoro modulu ise:
Inwe Mgbalite Ije Ozi Na-aga n'ihu
Akwụkwọ nkwado ITIL na-akwado nkà ọkachamara nke onye nchịkọta ahụ n'iji IT dịka ngwá ọrụ dị ike iji mee ka azụmahịa dị elu.
Nke a bụ ndepụta ụfọdụ akwụkwọ ọma ndị ụmụ akwụkwọ nwere ike ịgụ iji nweta akwụkwọ ikikere ITIL:
Nchịkọta Ọrụ Nhazi: Ntuziaka maka NDI Ntụle Ihe Nlereanya nke ITIL
E bipụtara ya site na BCS na R.Griffiths, E. Brewster, A. Lawes na J. Sansbury, akwụkwọ a bụ ezigbo ihe ọmụma maka ndị na-achọ iwepụ ule ahụ ná mgbalị mbụ ha.
Lee kwa:Akara Akara Ọrụ Ohere
Ọ ga-aka mma ịkpọ ya akwụkwọ ntụziaka dịka ọ na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịchọta ọkwa ha maara na njikere ha ịpụta maka ule. Nke a bụ ọrụ ikikere nke eze nke a na-akọwapụta na ngalaba anọ-akụkụ nke mbụ na-enye nchịkọta nlekọta ọrụ; ngalaba nke abụọ kpuchiri ụdị dị iche iche nke usoro ndụ ndụ ITIL, ngalaba nke atọ na-enye nghọta n'ime usoro & ọrụ ITIL; ngalaba nke anọ bụ maka nha na metrics.
N'ịbụ nke OGC nyere, akwụkwọ a kọwaa usoro ntọala ise nke ITIL na ise ise. Ọ na-amalite site na atụmatụ ọrụ, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ma na-ekpuchi niile modul n'etiti.
A na-ejikọta akwụkwọ ise ahụ n'ime ụlọ ahụ na nke ọ bụla na-ejikọta na ọkwa mbụ. Ha niile na-atụle banyere nlekọta ọrụ dịka omume. Akwụkwọ Ịntanetị ITIL na-adịkwa ka PDF.
Akwukwo akwukwo ihe omuma nke 2011 nke bu ITIL
Akwụkwọ akwụkwọ a na-edepụta ndị nkụzi ITIL kachasị mma - Helen Morris, na Liz Gallacher. Ọ na-emepụta usoro usoro ndụ ndụ ITIL na ụzọ dị mfe nke na-eme ka ọ dị mfe nghọta. E nwere mmesapụ aka nke ndịna-eserese, eserese na ihe atụ nke na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịmụrụ ihe n'onwe ha. Ihe di n'ime ya di n'usoro ezi uche ma gbasaa ya na ihe omuma na ihe omumu na njedebe nke isi nke isi iji kwado nghọta.
Isi mmalite ITIL dị mkpa: Ihe nyocha nke ị chọrọ
Onye edemede nke isi akwụkwọ ITIL, Claire Agutter, nyere akwụkwọ a bụ ihe magburu onwe ya maka ụmụ akwụkwọ maka mmụta. Isi mmalite ITIL na-ekwurịta ihe ndị dị mkpa nke ITIL n'ụzọ dịgasị iche nke dị n'usoro, dị mfe ma dị mfe nghọta.
Lee kwa:Ajuju Ajuju na Azịza maka akwukwo nyocha ITIL 2017
Ọ bụ ezie na obere eserese ndị ahụ nwere ike ọ gaghị adọrọ mma ma ọ bụ ezigbo ntụziaka maka ndị na-amalite ịlụ bụ ndị chọrọ ịchọta nkọwa nke isiokwu ahụ.
Ntuziaka nduzi ITIL V3
Ntuziaka Ntuziaka nke ITIL V3 bụ nsụgharị eBook n'efu site na Taruu, bụ ụlọ ọrụ nlekọta ọrụ IT na Indiana. Ọ bụ ihe enyemaka 45 na-enye aka na-ekpuchi echiche nile nke ntọala IITL. Iji ihe omuma ya mee ihe na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ịgụ. Ọ dị nkenke ma kọwapụta ihe dị mkpa dị mfe n'ụzọ doro anya. Ọ na-ejekwa ozi dịka akwụkwọ mmeghe maka ndị na-amalite na maka ndị chọrọ ịme ka ihe ọmụma ha sie ike.
Ịga Akwụkwọ Nyocha ITIL - 2011 Edition
Akwụkwọ a bụ ezigbo enyi maka ụmụ akwụkwọ na-achọ akwụkwọ ntọala ITIL. Ịga akwụkwọ nyocha ITIL gị bụ akwụkwọ akwụkwọ ITIL (nke TSO) nyere ya, onye Accreditor officiel ITIL kwadoro ya. Nke a na-enye ntụziaka zuru ezu nke usoro ITIL. Ọ na-ekpuchi isi ọ bụghị nanị na nlekọta ọrụ na nke ọ bụla n'ime mkpụrụ ndụ ndụ ndụ ise ma na-enye ihe ọmụma gbasara ule ahụ n'onwe ya.
Lee kwa:Akwụkwọ ITIL - Ntuzi zuru ezu
Ndepụta akwụkwọ ndị a dị n'elu abụghị ihe na-agwụ ike. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ maka ụmụ akwụkwọ iji meziwanye ihe ọmụma ha ma nyere aka na ọzụzụ ITIL na asambodo.
# itil ntọala traininng
# itil ntọala ntọala
Ọ bụ ọzụzụ na Gurgaon
ntinye akwụkwọ akara na Gurgaon
Kedu nke ka mma isii sigma ma ọ bụ Itil? Kedu ihe dị iche?
Kedu ihe bụ ITIL? Kedu ihe bụ uru nke akwụkwọ ikikere ITIL?